China AD03 CBD / THC Pena Vape azo alaina miaraka amin'ny mpanamboatra seranan-tsambo azo averina ambany, tsy misy vy mavesatra miaraka amin'ny tsiro madio sy orinasa vaventy etona | Vape Alphagreen
Raha hampiasa ny tranokala Alphagreenvape dia tsy maintsy feno 21 taona na mihoatra ianao. Azafady mba hamarino ny taonanao alohan'ny hidirana amin'ilay tranokala.
18 na mihoatra aho
Latsaky ny 18 taona aho
Mampiasa cookies izahay hanatsarana ny tranokalanay sy ny zavatra niainanao nitety azy. Rehefa manohy mizaha ny tranokalanay ianao dia manaiky ny politikan'ny cookie
Miala tsiny fa tsy avela ny taonanao
AD03 CBD / THC Pena Vape azo alefa miaraka amin'ny mpamokatra seranana ambany famerenam-bolo vita amin'ny seramika tsy misy vy mavesatra miaraka amin'ny tsiro madio sy etona lehibe.
Famaritana fohy: Izahay dia manamboatra sy manome AD03 CBD / THC penina vape azo, ny endrika tsara ny fisehoana vape dia mitondra mpanjifa mahazatra maro. Ho fanampin'izay, niara-niasa tamin'ny orinasa rongony METY nahazo alalana nandritra ny taona maro izahay, manarona ny ankamaroan'ny tsenan'i Amerika Avaratra sy Eropa. Manantena izahay fa ho mpiara-miasa maharitra any Shina.
Vidiny F0B: US $ 1.85 - 2.0 / Piece
Fahaizana manome: 300 000 Pieces / Month
Fepetra fandoavana: T / T, PayPal, L / C, D / A, D / P
Amin'ny maha mpanamboatra fitaovana vape any Sina dia manana ny toeram-piasana GMP matihanina indrindra izahay. Tsy vitan'ny hoe karazana cartridge ihany no atolotray fa karazana penina vape azo fanary ihany koa. Manamboatra vokatra vaovao tsy tapaka izahay. Manome serivisy OEM / ODM ho an'ny mpanjifanay izahay, mety ho iray amin'izy ireo ho mpanjifa marika fotsy. Ankoatr'izay, serivisy ho an'ny mpanjifa 5-Stars no motera fitomboantsika ao amin'ny indostrian'ny CBD vape mandritra ny fotoana maharitra. afa-tsycartridge SY penina vape, izahay koa Omeo vape Accessories SY fonosana namboarina.
1. Fampidirana ny vokatra ny AD03CBD / THC Vape Pen azo
AD03 CBD / THC penina vape azo ampiasaina dia iray amin'ireo penina vape azo ovaina indrindra. Izy io dia penina vape azo ovaina kely, ary io no mitovy amin'ny penina paraky. Namboarina tamin'ny tendrony ceramic tank, vera tsy misy firaka, ary landihazo avo lenta.
Na dia 1.7mm aza ny haben'ny lehibe indrindra amin'ny lavaka fitrandrahana solika, ny rafitra manokana dia mahatonga ny taham-pifandraisana lehibe. Mampiasà haben'ny fihinanana menaka kely kokoa, fa afaka manadio tsara kokoa ianao.
Ny batterie ampiasainay batterie grady iray manana 350mAh capacit, ampy tanteraka ny mampiasa menaka grama iray, satria mihena ny bateria mandritra ny fitehirizana (Izahay dia mijery ny bateria tsirairay sy ny taonan'ny batterie tsirairay alohan'ny fandefasana azy), hisorohana an'io olana io, dia namorona rechargeable izahay seranan-tsambo any ambany. Ka tsy mila miraharaha ny olan'ny bateria ianao.
2. Paramèteran'ny vokatra (famaritana) an'ny AD03 CBD / THC Vape Pen azo
Metal / Pyrex vera / coiler keramika
Loaka fihinanana solika
2 * 1.0mm / 1.5mm / 1.7mm, haben'ny （
3. Fampisehoana vokatra sy fampiharana ny AD03 CBD / THC Vape Pen azo
—— Haavo be mihinana, mety amin'ny menaka matevina. (Lavaka fitrandrahana solika namboarina)
—— Amin'ny seranan-tsambo azo averina.
——Tsy misy Heavy Metal, karazany tsy misy firaka.
——Mangataha karazana menaka CBD / THC isan-karazany.
——Tsy misy famoronana boka.
—— Formula Ceramic manokana
——Tohana ny serivisy OEM / ODM
4. Antsipirian'ny famokarana ny AD03 CBD / THC Vape Pen azo
① Atsofohy mora foana ny menaka THC na CBD, fahafaha tanky 0,5ml & 1.0ml.
② Tsy misy metaly mavesatra mihitsy.
③ Taham-pifandraisana solika avo lenta, mifanaraka amin'ny menaka matevina.
Printing Fanontana logo manokana sy loko hafa amin'ny tendrony, manaova marika manokana
⑤ Mini karazana, 1gram fotsiny 106mm.
Battery 350mAh batterie mahazaka lehibe, ampy ho an'ny grama iray.
⑦ Seranana seranan-tseranana ao ambany.
Teo aloha: AD01-2 CBD / THC Vape Pen mpanamboatra keramika vita amin'ny keramika tsy misy vy mavesatra miaraka amin'ny tsiro madio sy etona lehibe
Manaraka: AD10 CBD / THC Pod azo ampiasaina amin'ny penina Vape miaraka amin'ny mpanamboatra seranana ambany ambany azo ampiasaina tsy misy metaly mavesatra miaraka amin'ny tsiro madio sy etona lehibe.
vape menaka cbd azo ampiasaina
penina vape seramika
penina vape azo
penina vape azo averina
Ny tanjontsika amin'ny famolavolana dia ergonomika,
fanavaozana, Functional ary fanatanterahana ny filan'ny mpanjifa.
Telefaona:: +86 13559135783
© Copyright - 2010-2021: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra asongadina, Sitemap, cbd vape pen, penina vape bateria, penina vape azo, Bateria 510, vape menaka cbd azo ampiasaina, penina vape azo averina, Vokatra rehetra